19-Nor-4-androstene-3,17-dione ntụ (734-32-7) hplc≥98% | AASraw
/ ngwaahịa / ndị ọzọ na- / 19-Nor-4-androstene-3,17-dione Powder (734-32-7)
Rating: SKU: 734-32-7. Category: ndị ọzọ na-
AASraw nọ na njikọ na ike imepụta site na gram ruo n'usoro nke 19-Nor-4-androstene-3,17-dione ntụ (734-32-7), n'okpuru usoro CGMP na njikwa njikwa njikwa mma.
19-Nor-4-androstene-3,17-dione ntụ (734-32-7) vidiyo
19-Nor-4-androstene-3,17-dione ntụ (734-32-7) Specification:
Ngwurugwu Chemical: Product Name: 19-Nor-4-andreene-3,17-dione
Cas Mba: 734-32-7
molekụla Formula: C18H24O2
molekụla arọ: 272.38
19-Nor-4-androstene-3,17-dione ntụ (734-32-7) Daha:
Nor-4-androstene-3,17-dioneal a na-akpọ Norandrostenedione na 19-Norandrostenedione, A na-eji ya na mgbakwunye nri nri. 19-Nor-4-androstene-3,17-dione nwere ike iji dị ka ọkọlọtọ ntụle na mkpebi nke 19-nor-4-androstene-3,17-dione na ihe mgbakwunye nri na-eji chromatography mmiri mmiri, 19-Norandrostenedione nwere ike ịgbakwunye na 19-nortestosterone na ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị. agbanyeghị 19-norandrostenedione anaghị emetụta testosterone. Ma ma ọ bụ na-abawanye na ogo 19-nortestosterone ga-akwagide ogologo oge site na iji 19-norandrostenedione iji gosipụta mmụba nke njigide nitrogen na ike ahụ ike na oke amaghi. E gosipụtakwala 19-Norandrostenedione iji jikọta ndị nabatara androgen yana oke nhọrọ. Transactivation nke androgen receptor na-adabere na onye na-ede akụkọ na-ede akụkọ bụ ugboro 10 dị ala karịa nke dihydrotestosterone mepụtara.